Ike mmeghari ohuru na nke anaghị emeghari: njirimara na ụdị | Mmeghari ohuru Green
Anyị na -ekwu na isi mmalite ume na -emegharị emegharị, mgbe ọ sitere na isi mmalite na ọ gaghị agwụ ka oge na -aga. Na mgbakwunye, ọ dị ọcha, anaghị emerụ emerụ ma nwee ụdị akụ dị iche iche. E nwere ụzọ dị iche iche isi nweta ume ọhụrụ na mbara ụwa anyị. Site n'ọganihu nke teknụzụ, ndị mmadụ achọpụtala ụzọ ndị ọzọ ha ga -esi jiri ike nke ụwa anyị agbanyeghị na ha agbanwere na mmanụ ọkụ wee gaa n'ihu na -emeso mmetụta mgbanwe ihu igwe. E nwere ụdị dị iche iche ike mmeghari ohuru na nke enweghi ike megharia na nke ọ bụla n'ime ha nwere njiri mara pụrụ iche.
N'edemede a, anyị ga-agwa gị nke bụ ike na-emegharị emegharị na nke anaghị emegharị emegharị n'ụwa.
1 Ike mmeghari ohuru na nke anaghi emeghari
1.1 Ihe ọkụkụ
1.4 Ike ikuku
1.5 Mmiri ike
1.6 Ike hydraulic
1.7 Ike anyanwụ
2 Ike mmeghari ohuru na nke anaghị emeghari: mmanụ ọkụ
Ndị a bụ mmanụ mmiri ma ọ bụ mmanụ gas na -emepụta site na ihe ọkụkụ ma ọ bụ anụmanụ. Ọ bụ ụdị ume ọhụrụ nke na -agaghị agwụ ma nwee ike izute mkpa ụgbọ njem. Site n'iji mmanụ ọkụ ndị a, anyị nwere ike belata ịdabere na mmanụ ma belata mbibi ọ na -ebute gburugburu. N'etiti ihe kacha mkpa biofuels, anyị achọpụtala biodiesel na bioethanol.
Ụdị ọzọ nke ume mmeghari bụ ume biomass. Ọ bụ ihe na -edozi ahụ nke a na -eji emepụta ike. Ọ na -anakọta otu ihe ọkụkụ nwere ihe dị iche iche na njirimara isi mmalite dị iche iche. Biomass Enwere ike ịtụle ya dị ka ihe ọkụkụ na -emepụta na usoro ndu nke enwere ike iji dị ka ume.
Dịka ọmụmaatụ, anyị na -ahụ akụkụ ahịhịa nke ihe ubi na oke ọhịa, nsị mmiri, unyi nsị na unyi siri ike n'obodo ukwu. Enwere ọtụtụ ụzọ iji ike biomass.
N'ụzọ bụ isi, ụdị ume a sitere n'ịchịkọta ike kinetic nke ikuku ikuku nwere na imepụta ọkụ eletrik na ya. Kemgbe oge gboo, Ọ bụ ebe ụmụ mmadụ na -eji enweta ụgbọ mmiri na -akwọ ụgbọ mmiri, na -egwe ọka, ma ọ bụ na -amịpụta mmiri.
Taa, a na -eji igwe ikuku na -ebunye ọkụ eletrik site na ifufe. Dabere n'otú ị siri fụọ opi, ị nwere ike nweta karịa ma ọ bụ obere. E nwere ụdị ume ikuku abụọ, oke osimiri na terrestrial.
Ọ bụ ike echekwara n'okpuru elu ụwa n'ụdị okpomọkụ. Ala anyị juputara n'ike ma anyị nwere ike iji ike a wepụta ọkụ eletrik. Ọ bụ mmepụta ihe na-akwụsịghị awa 24, adịghị agwụ agwụ, adịghị agwụ agwụ, enweghị mmetọ ọ bụla.
Ọ bụ otu teknụzụ nwere ike iji ike oke osimiri. Ọ dabere na ihu igwe oge niile, ike nke oke osimiri anaghị akwụsị akwụsị, mana ọ na -ejikwa ike eme ihe nke ọma.
Ebili mmiri, ebili mmiri, ebili mmiri, na ọdịiche okpomọkụ n'etiti elu nke oke osimiri nwere ike iji mee ihe dị ka ike ọkụ. Na mgbakwunye, uru ya bụ na ọ naghị emepụta mmetụta gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ihe anya nke anyị ga -eburu n'uche.
Hydraulic hydraulic bụ ume ike kinetic nke ahụ mmiri na -eji. N'ihi nsụda mmiri nke ekweghị ekwe kpatara, ike nke mmiri nwere ike ịkwanye turbines ndị na -emepụta ọkụ eletrik. Ọ bara uru ịkọwa na ụdị ume ọhụrụ a bụ isi mmalite nke ọkụ eletrik buru ibu ruo etiti narị afọ nke XNUMX.
A na -ekwu na ọrụ ya bụ mmiri ọkụ eletrik, nke a ghọtara dị ka isi iyi ọkụ na -anaghị emetụta gburugburu ebe obibi.
Ọ na -eji ogwe ọkụ anyanwụ na -eme ka radieshon anyanwụ mere ka ọ bụrụ ọkụ eletrik ozugbo. Site na sel fotovoltaic, radieshon nke na -adakwasị ha nwere ike kpalie elektrọnị ma mepụta ọdịiche nwere ike ịdị. Ka ị na -ejikọkwu ogwe anyanwụ, nke ukwuu enwere ike ịdị iche.
Enwekwara ụdị ike anyanwụ ndị ọzọ ewezuga fotovoltaic dịka ike ọkụ ọkụ anyanwụ na ike thermoelectric anyanwụ. Ike ọkụ nke anyanwụ bụ ike dị iche iche nke anyanwụ na ọ bụ ya ka ọ ga -egbo mkpa ọkụ nke ihe owuwu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ọrụ ugbo. Nke a ọ bụ ụzọ dị oke mma iji ike anyanwụ.
N'aka nke ọzọ, ike anyanwụ thermoelectric na -eji anya ma ọ bụ enyo nwere ike itinye radieshon anyanwụ na obere ala. Nke a bụ ka ha ga -esi ruo oke okpomọkụ, yabụ na -agbanwe okpomọkụ ka ọ bụrụ ọkụ eletrik.
Ike mmeghari ohuru na nke anaghị emeghari: mmanụ ọkụ
Ugbu a, a na -eji ụdị mmanụ ọkụ dị iche iche eme ihe maka ume. Nke ọ bụla nwere njiri mara na mbido ya. Agbanyeghị, ha niile nwere nnukwu ume maka ebumnuche dị iche iche.
Nke a bụ ndị isi:
Carbon. Ọ bụ kol a na -eji eme njem. A na -ahụkarị carbon na nnukwu nkwụnye ego n'ime ala. Iji wepụta ya, a na -arụ ebe a na -egwupụta akụ ebe a na -ewepụta akụ.
Mmanụ. Ọ bụ ngwakọta nke ọtụtụ hydrocarbons na mmiri mmiri. Ihe mejupụtara ya bụ nnukwu adịghị ọcha ndị ọzọ, a na-ejikwa ya enweta mmanụ na ihe ndị ọzọ.
Gas nkịtị. Ọ mejupụtara methane gas. Gas a dabara na akụkụ kacha nfe nke hydrocarbons. Ya mere, ụfọdụ ndị na -ekwu na ikuku gas anaghị enwe mmetọ na ịdị ọcha dị elu. A na -ewepụta ya na mpaghara mmanụ n'ụdị gas.
Akpụkpọ ájá na ụgbụ mmanụ. Ha bụ ihe kpụrụ aja nke nwere ụrọ nwere obere foduru nke ihe ndị dị ndụ. Ihe mejupụtara ihe ọkụkụ a bụ ihe mebiri emebi nke nwere ụdị ọmarịcha mmanụ.
La ike nuklia a na -ahụkwa ya ka ụdị mmanụ ọkụ. A na -ewepụta ya n'ihi mmeghachi omume nuklia a na -akpọ fission nuklia. Ọ bụ nkewa nke nuclei nke atọm dị arọ dịka uranium ma ọ bụ plutonium.
A na-ahụta ha dị ka ndị anaghị emegharị emegharị ebe ọ bụ na a na-ahụ mmanụ na isi nri. Nke a pụtara na ihe kpụrụ bụ organic ma kpuchie ya site na sedimenti. Ọ na -emikpu n'ime miri emi, n'okpuru nrụgide nke ihe dị n'ime ala, ọ na -agbanwe ghọọ hydrocarbons.
Usoro a na -ewe ọtụtụ nde afọ. Ya mere, n'agbanyeghị na a na -emepụta mmanụ n'esepụghị aka, a na -emepụta ya n'obere oke nha. Kedu ihe ọzọ, ọnụego mmanụ oriri na -adị oke ọsọ ọsọ nke mere na ahazila ụbọchị oriri ya. N'ime mmeghachi omume mmanụ, nje aerobic na -ebu ụzọ eme ihe na nje anaerobic na -apụta ma emechaa. Mmeghachi omume ndị a na -ewepụta ikuku oxygen, nitrogen, na sọlfọ. Ihe atọ ndị a bụ akụkụ nke ogige hydrocarbon na -agbanwe agbanwe.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara ume mmeghari na nke anaghị emegharị emegharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike mmeghari ohuru na nke anaghi emeghari